ဆန်ချိုရဲ့ အရည်အသွေးတွေ သူ့ကြောင့် ဘယ်သူတွေ ပိုပြီးအဆင်ပြေမလဲဆိုတာ တွေ ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တဲ့…. – Sport Gaber
ဆန်ချိုရဲ့ အရည်အသွေးတွေ သူ့ကြောင့် ဘယ်သူတွေ ပိုပြီးအဆင်ပြေမလဲဆိုတာ တွေ ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တဲ့….
လီဗာပူး နဲ့ အင်္ဂလန် လက်ရွေးစင် ကွင်းလယ်လူဟောင်း ဒန်နီ မာဖီက ဒီနွေမှာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းဆီ ပေါင်73သန်းနဲ့ ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တဲ့ တောင်ပံတိုက်စစ် ကစားသမား ဖြစ်သူ ဂျေဒန် ဆန်ချိုရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ကောင်းမွန်မှုက အသင်းအတွက် အကျိုးဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ ပြောခဲ့လိုက်ပါတယ် ။
ဆန်ချိုဟာ ဒီနွေမှာ ယူနိုက်တက် အသင်းဆီ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သူ ဖြစ်ပြီး အခုတော့ အသင်းနဲ့ လေ့ကျင့်ရေးတွေ အတူ လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့် သူဟာ ယူနိုက်တက်တို့ ရာသီအဖွင့်ပွဲစဥ် အဖြစ် လိဒ်စ် ယူနိုက်တက် အသင်းနဲ့ ကစားမယ့် ပွဲစဥ်မှာ သူဟာ ပါဝင်လာဖို့ ရှိနေပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီတုန်းက ညာတောင်ပံ တိုက်စစ် နေရာမှာ အားနည်းချက် ရှိခဲ့တဲ့ အသင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုတော့ လျင်မြန်သလို ဂိုးသွင်းမှု ၊ ဖန်တီးမှုတွေပါ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ဆန်ချိုဟာ အသင်းကို ပိုကောင်းစေနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ကြေးပေးခံ နေခဲ့ရ ပါတယ် ။
အခုတော့ လီဗာပူး ကွင်းလယ်လူဟောင်း ဒန်နီ မာဖီ ကလည်း ဆန်ချို ရောက်လာခဲ့ခြင်းက ဆိုးလ်ရှား အတွက် ရွေးချယ်မှုတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေမယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်း ၊ သူ့ကြောင့် ဂရင်းဝုဒ်ဟာ ကစားချင်တဲ့ နေရာမှာ ကစားခွင့် ရရှိလိမ့်မယ်လို့ ထင်မှတ်ကြောင်း ပြောကြား သွားခဲ့လိုက်် ပါတယ် ။
” သူရောက်လာခြင်းက အိုလီ ဂန်နာ ဆိုးလ်ရှား အတွက် ရွေးချယ်ခွင့် တွေကို ပေးဆောင်သွားမှာပါ ။ သူဟာ ညာဖက်အခြမ်းမှာ ကစားရတာကို နှစ်ခြိုက်ပါတယ် ။ အဲ့တာက မေဆွန် ဂရင်းဝုဒ်ကို သူ ကစားချင်တဲ့ တိုက်စစ် နေရာမှာ ကစားခွင့်တွေ ပိုမို ရရှိစေနိုင်ပါ လိမ့်မယ် ”
” ဆန်ချိုမှာ ရှိနေခဲ့တဲ့ အရည်အသွေးတွေက တောင်ပံ တိုက်စစ် ကစားသမားတစ်ဦးအတွက် တကယ်ပဲ လိုအပ်လှ ပါတယ် ။ သူဟာ ဂိုးသွင်းမှု ၊ ဖန်တီးမှုတွေကို လုပ်ရာမှာ တိကျသေချာသူ တစ်ဦးပါပဲ ။ သူရဲ့ ထိုးထွင်း သိမြင် နားလည်မှု ၊ ဆုံးဖြတ်ချ ချမှတ်နိုင်မှုတွေက ကောင်းလှပါတယ် ”
” ဘယ်အချိန် ဘောလုံး ပေးပို့ရမလဲ ၊ ဘယ်အချိန် ဖြတ်တင်ဘော ပေးရမလဲ ၊ ဘယ်အချိန်မှာ တကိုယ်ကောင်းဆန်ပြီး ဂိုးသွင်းရမလဲ ဆိုတာတွေကို သူကောင်းကောင်း သိပါတယ် ။ ကွင်းထဲမှာ သူကစားပေးတဲ့ ပုံစံမျိုးက ခံစစ် ကစားသမားတွေအတွက် လူကပ်ကစားရ ခက်ခဲလွန်းစေပါတယ် ”
” သူဟာ ဂိုးဧရိယာဖက်လည်း ဝင်ရောက် ကစားနိုင်စွမ်း ရှိသလို တောင်ပံတစ်လျှောက်လည်း ပြေးလွှားကစားနိုင်စွမ်း ရှိတဲ့အတွက် ဒီလိုကစားသမားမျိုးကို ဟန့်တားရတာ အိပ်မက်ဆိုး တစ်ခုလို ပါပဲ ။ သူဟာ အသင်းနဲ့ လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဥ် အနည်းငယ် လုပ်ဆောင်ပြီးတာနဲ့ ကွင်းထဲ ခြေစွမ်းပြနိုင်မယ့် ကစားသမားမျိုးပါ ”
” သူဟာ ယုံကြည်မှု အားကောင်းပြီးသား ကစားသမား တစ်ဦးပါ ။ သူဟာ အသင်းလိုက် ကစားပုံ ပိုကောင်းလို့လည်း ဆိုးလ်ရှားက သူ့ကို နှစ်ခြိုက်နေခဲ့တာပါ ။ သူဟာ စစ်မှန်တဲ့ team player တစ်ဦး ပါပဲ ။ သူက ကာဗာနီ ၊ ဂရင်းဝုဒ် ၊ မာရှယ် ၊ ရပ်ရှ်ဖို့ တို့နဲ့ အတွဲအဖက်ညီအောင် ဖြည့်ကစားပေးနိုင်သူ တစ်ဦးပါပဲ ။ ခမ်းနားတဲ့အသင်းတိုင်းမှာ ဒီလို ကစားသမား လိုအပ်လှပါတယ် ” လို့ မာဖီ က ပြောခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
Previous Article သွားလာရခက်ခဲတဲ့ ရပ်ကွက်တွေအထိ ဆိုင်ကယ်ဘေးတွဲနဲ့ လိုအပ်တာတွေ ကိုယ်တိုင်လိုက်လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
Next Article ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး(ငြိမ်း) သန်းရွှေ ကွယ်လွန် သွားကြောင်း သတင်းများထွက်ပေါ်နေ…